R940 Crawler Excavator Kubva kuLibherr | ACE MACHINERY
France R&D uye nzvimbo yekugadzira ichangopedza muchina mutsva -R940 Crawler Excavator inova zvigadzirwa zvazvino zvechikamu cheR 944C
Yakabatsirwa neyakafuma ruzivo kubva kuLibherr, muchina mutsva une kugona kwekushanda kwakanaka, uye izvo zvinogona kuvaka mwero mutsva weiri kuuya excavator. Nekuti muchina uyu unogona kuita zvimwe zvinoenderana nharaunda. Uye iwo muchina unowedzera iwo usina chinhu weR950 uye R960 akateedzana anogona kukodzera kune imwe nzvimbo yekuparadza.
Iyi nyowani yemuchina sutu yeEU-5 standard emission. Uye goho rate inogona kusvika 200KW, panguva imwechete iine iyo DOC, SCR sytem, ​​DPF uye udzikise iyo EGR vharuvhu. Zvese izvo zvishandiso zvinogona kuita kuchengetedza mafuta uye kuchengetedza Injini. Kunze kwezvo, inogona kupa iyo Tier 4 Yekupedzisira vhezheni. Pakupedzisira, Libherr anopa iyo inowirirana injini yeimwe yakakosha musika.
Pano pane chimwe chikamu chakakosha LDC, Nekuchengetedzwa kwekuchengetedza zvikamu, Mutyairi anogona kuziva chinzvimbo chemuchina uye dozer nzvimbo, kana paine njodzi iyo LDC ichagamuchira meseji ita kuti mutyairi azive.
Munguva imwechete iyo Mutyairi kabhini anoita zvakawanda kugadzirisa seye Hydraulic chassis, uye bvisika Counterweight ndiro. Mutyairi anogona zvakare kushandisa iyo Air compressor kugadzira mhepo nyowani mukabhini.
Muchina mutsva uyu unogona kuvaka zvakare muyero weDololition Excavator.